TalkBand B5, akanjo vaovao an'ny Huawei miaraka amin'ny efijery AMOLED | Androidsis
TalkBand B5, Huawei vaovao azo ampiasaina amin'ny efijery AMOLED
Ny iray amin'ireo mpanamboatra finday mijanona eo amin'ny tsenan'ny entina entina dia ny orinasa sinoa Huawei. Na dia marina aza fa mifantoka, mihoatra ny zava-drehetra, amin'ny sehatry ny telefaona, tsy manao ambanin-javatra io faritra manan-danja io izay ahazoana ny safidin'ny mpampiasa maro izay tsy afaka tsy misy na dia iray aza amin'ireo gadget ireo.
Vao tsy ela akory izay, nanambara ny orinasan-tserasera vaovao eo anelanelany, ny orinasa Kirin 710, ary fitaovana vaovao roa, ny Nova 3 y Nova 3i. Niampy izany ny TalkBand B5, ilay fehin-tànana marani-tsaina vaovao izay manaraka ny TalkBand B3 navoaka ny taona talohan'ny farany.
Ity smartband ity dia tonga mba hanamora ny asa maro izay hataontsika amin'ny finday, ohatra, ohatra, ny famaliana antso, ny fijerena ny ora sy ny daty ary ny asa tsotra hafa izay tsy tokony hiankina amin'ny telefaona, ka hanehoana ny tenany ho toy ny fitaovana / fitaovana ilaina hampihenana ny hetsika sasany.
Ny TalkBand B5 dia miaraka amin'ny efijery AMOLED 1.13-inch 300 x 160 teboka vahaolana ambanin'ny vera miolaka 2.5D. Ho fampitahana, ny efijery dia manodidina ny 2.4 heny lehibe noho ny teo alohany ary afaka mampiseho ny atiny WeChat sy QQ, ary koa ny ora sy ny daty, ny SMS, ny vaovao, ny fampandrenesana, ankoatry ny fampiharana sy fampahalalana hafa.
Fitaovana 2 amin'ny 1 ity Izy io dia azo ampiasaina ho metatra fanatanjahan-tena ary, ho fanampin'izay, ho headset Bluetooth tokana tokana izay hampiasaina hamaliana sy hamaliana antso. Raha te hiova amin'ny asa iray mankany amin'ny iray hafa, raha mila mpanara-maso ny vatana ianao dia tsy maintsy ampifandraisintsika amin'ilay bracelet ilay fitaovana. Raha tsy izany, raha tadiavina ho fitaovana tsy misy tariby izy dia tsy maintsy esorintsika aminy io ary apetrakao amin'ny sofina.
Ny Wearable dia manana rafitra fampihenana ny tabataba noho ny mikrô mikambana miorim-paka, ary ny output audio omeny dia famaritana avo. Ary koa, manana ny fanohanan'ny mpiantso izy ary miantso ny asan'ny moana ary koa ny safidy haingana.
Ilay fitaovana azo ampiasaina dia miaraka amin'ny teknolojia Huawei TruRelax ihany koa, izay manadihady ny fiovaovan'ny tahan'ny fo sy ny fihenan-tsasan'ny mpitafy. KOA manolotra fiofanana miaina mba hiala sasatra. Etsy ankilany, tonga miaraka amin'ny Huawei TruSidur 2.0, fiasa iray izay mampiasa ny spectrum dynamique cardiopulmonary plus (CPC) hifehezana ny firafitry ny torimaso manontolo, ao anatin'izany ny torimaso lalina (REM). Ity endri-javatra ity dia manadihady ny fomban'ny torimaso an'ny mpampiasa ary manolotra torolàlana momba ny torimaso manokana ihany koa.
Ny teknolojia tahan'ny fo Huawei TruSeen 2.0, izay ampiharina amin'ity fehin-tànana maranitra ity, manolotra fanaraha-maso maharitra 24 ora tsy tapaka rehefa mihazakazaka, mandeha an-tongotra, bisikileta ary manao hetsika asa fanampiny. Miaraka amin'ny fanisam-bato, ny kajy fandoroana kaloria sy ny fandrefesana ny elanelana dia mamela ny mpampiasa hametraka drafitra fanatanterahana hetsika miorina amin'ny fanombanana ny tahan'ny fo, VO2 Max, ny fotoana fanarenana ary ny hafa. Angona mifandraika amin'izany.
Ny smartband koa dia manana fitaovana tsy maintsy ananana toy ny fampahatsiahivana, mpanampy ny feo, famantaranandro fanairana, fanaraha-maso lavitra ho an'ny atiny media, finday, ary maro hafa. Ho fanampin'izany, Izy io dia IP67 voamarina ho an'ny fanoherana ny vovoka sy ny rano, izay no tsy maha-olana ny orana na oviana na oviana.
Ity fitaovana ity dia mifandray amin'ny alàlan'ny Bluetooth 4.2 amin'ireo fitaovana mihazakazaka Android 4.4 na avo kokoa, ary ny iOS 9.0 na avo kokoa. Izy io dia ampiasain'ny batterie 108mAh izay afaka manome fotoana firesahana mandritra ny 6 ora amin'ny fiampangana tokana.
Ny TalkBand B5 dia tonga amin'ny fanontana ara-panatanjahantena miaraka amin'ny loko miloko telo mifatotra: lavenona, mainty sy volontany. Etsy ankilany, ny Business Edition dia miaraka amina fehy vy. Misy ihany koa ny kapila 18mm tsy voatery vita amin'ny silicone, hoditra ary vy vy izay azontsika ovaina ho fanaingoana.
Mikasika ny vidiny, ny kinova fanatanjahan-tena dia mitentina 999 yuan, izay sahabo ho 127 euro eo ho eo, raha ny orinasa variant amin'ilay fitaovana azo ampitaina dia mitentina 1.199 yuan, izany hoe 152 euro eo ho eo no hiova. Misy koa ny variant fahatelo, ny dikan-damaody, izay mitentina 1.499 yuan (Sahabo ho 191 euro). Azo amidy anio izy any Chine.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » TalkBand B5, Huawei vaovao azo ampiasaina amin'ny efijery AMOLED
Huawei dia efa nivarotra finday 100 tapitrisa hatreto tamin'ny 2018